RASMI: Lionel Messi oo loo magacaabay xiddiga isbuuca ee Champions League… (Yaa ku guuleystay Goolka todobaadka ee UCL?) – Gool FM
RASMI: Lionel Messi oo loo magacaabay xiddiga isbuuca ee Champions League… (Yaa ku guuleystay Goolka todobaadka ee UCL?)
Haaruun April 19, 2019
(Barcelona) 19 Abriil 2019. Lionel Messi ayaa loo magacaabay xiddiga Isbuuca ee Champions League kaddib labadii gool ee uu todobaadkan ka dhaliyey kooxda Manchester United, kulankaasoo ka tirsanaa siddeed dhammaadka Champions League oo ay guusha gaartay Barcelona.
Leo ayaa u dhaliyey goolka furitaan oo aad u qurux badnaa kooxdiisa Barcelona kaddibna waxa uu goolhaye David De Gea ugu shubay goolka labaad afar daqiiqo uun kaddib goolkaas, taasoo u sahashay kooxda martida loo ahaa Barca inay guul 3-0 ku gaaraan garoonkooda Camp Nou.
Messi waxaa uu abaal-marinta laacibka ugu bandhigga fiicnaa isbuucan Champions League ku garaacay oo kula tartamayey saddexda xiddig ee kala ah; Roberto Firmino, Matthijs de Ligt iyo Heung-min Son kuwaasoo laftoodu wacdaro muuqda dhigay kulamadii lugta labaad ee siddeed dhammaadka Champions League Isbuucaan.
Kabtanka kooxda Barcelona ayaa tartankan haatan 10 gool ka dhaliyey xilli ciyaareedkan, kaliya siddeed kulan oo uu ciyaaray taasoo la micno ah inuu kali ku yahay hoggaanka gooldhalinta Champions League.
Dhinaca kale xiddiga reer Argentina ee Lionel Messi ayaa ku guuleystay abaal-marinta laacibka dhaliyey goolkii ugu quruxda badnaa tartanka Champions League todobaadkan, waxaana uu ku qaatay goolkii uu ka dhaliyey kooxda Manchester United ee inta ku soo dhex orday xiddigaha kooxda reer England dacal ka siiyey kubadda goolhaye De Gea.
Abaal-marinta goolka Isbuucan Champions League waxa uu Lionel Messi ku garaacay goolashii ay dhaliyeen todobaadkan, Raheem Sterling, David Neres iyo midkii uu laacibka ay isku kooxda yihiin ee Philippe Coutinho ugu shubay kooxda Manchester United ee halkaan hoose ka daawo goolasha ku tartamay.
Tababare Allegri oo ka hadlay mustaqbalka Ronaldo, kaddib markii ay Juventus ka hartay Champions League
Kooxda Juventus oo go'aamisay saxiixa Weeraryahanka Liverpool ee Mohamed Salah